Home News Aqalka Sare oo maanta kulmaya iyo Mooshinka Jawaari oo laga hadlayo
Aqalka Sare oo maanta kulmaya iyo Mooshinka Jawaari oo laga hadlayo
Xubnaha Guddiga Aqalka Sare oo maanta lagu wado in ay kulan ku yeeshaan Magaalada Muqdisho ayaa warbixin ka dhageysanaya Guddigii 19-kii bishan ay u xilsaareen xalinta khilaafka ka dhex taagan Baarlamaanka Golaha Shacabka.
Khilaafka Golaha Shacabka ayaa waxa uu ka dhashay kadib markii Guddoomiyaha Golaha Shacabka Maxamed Sheekh Cusmaan (Jawaari) laga gudbiyay Mooshin.
Guddoomiyaha Guddiga Warfaafinta Golaha Aqalka Sare Axmed Macalin Cumar ayaa sheegay in maanta ay warbixin ka sugayaan guddigii ay u xilsaareen khilaafka ka dhextaagan xildhibaanada Golaha Shacabka.
Wuxuu sheegay Guddiyadan inta ay howsha ku guda jireen in ay kulamo la yeesheen xubnaha labada dhinac, ayna soo uruuriyeen warbixino kala duwan.
“Waxaa maanta Guddiga joogtada ee Golaha Aqalka Sare ay warbixin ka dhageysan doonaan Guddigii loo xilsaaray khilaafka ka dhextaagan Golaha SHacabka, waxay la kulmeen dhinacyo badan, waxayna soo uruuriyeen warbixino kala duwan.” Ayuu yiri Senator Axmed.